Kefir maka ụmụ ọhụrụ
Nne Ụmụaka dị n'okpuru otu afọ
Maka inye aka na-enye ụmụ ọhụrụ na-eto eto, kefir dị mkpa na nri. A sị ka e kwuchara, ngwaahịa a na-enyere aka na-edozi microflora, na-ebuwanye ibu, gbochie mmepe ọrịa ọrịa. Ngwaahịa a bara ọgaranya na calcium, vitamin na mineral.
Kefir maka ụmụ ọhụrụ - ngwaahịa pụrụ iche: n'ihi na nwatakịrị agaghị abụ ihe ọṅụṅụ kwesịrị ekwesị, nke ndị okenye na-eji. Maka nri oriri, ị kwesịrị ịzụta obere nwa kefir. Mana ngwọta kacha mma bụ ịkwadebe maka nwa kefir n'ụlọ .
Kedu esi edozi kefir ulo maka umuaka?
Ịkwadebe maka ịme nwa na-eme n'ụlọ ga-esi ike ma ghara iwe oge dị ukwuu. Ime nke a ị ga-achọ:
ite maka mmiri ara ehi;
otu iko maka ime akụkụ nke kefir;
mmiri ara ehi;
Dị ka efere maka mmiri ara ehi mmiri, ị ga-eji ihe ọṅụṅụ nke mmiri ara ehi na-ere ọkụ, nke pụtara na ọ ka mma ka ị ghara iji arịa ndị a na-emepụta aha maka nri kefir maka nwa ahụ n'ụlọ.
A pụrụ ịhọrọ mmiri si anụ ụlọ ma ọ bụ ndị a na-ahụ maka pasteurized, ọ bụ naanị na ọ bụrụ na abụba ọdịnaya nke ngwaahịa ahụ gafere 3.2%.
Dịka onye na-amalite, i nwere ike iji ụlọ ahịa nafir. Ma ọ bụrụ na ị na-eche otú ị ga-esi mee ka nwatakịrị bụrụ ihe bara uru kefir, mgbe ahụ ịhọrọ nri mmiri ara ehi ị ga - achọ iji tụlee ihe ndị a:
kefir, nke e ji mee ihe na-eko achịcha, kwesịrị inwe ndụ ndụ nke ihe karịrị ụbọchị 10;
ke ngwaahịa e kwesịrị mba mba ọzọ additives n'ụdị preservatives, dyes, ekpomeekpo fillers;
maka starter ị nwere ike iji bụghị ude mmirimmiri, kama ude mmiri;
Iji melite ogo ngwaahịa mbụ ahụ, a pụrụ itinye bifidobacteria .
Ọzọkwa ihe niile dị mfe:
Mmiri ara ehi obụpde ma kwe ka obụpde maka nkeji 1-2, wee hapụ ka ajụ oyi, ọ dịkwa mma ka ị ghara imegharị efere na ebe dị jụụ - uto nke ngwaahịa mbụ ga-aka mma.
Mgbe ịchịrị mmiri ara ehi dị n'okpuru okpomọkụ nke ahụ mmadụ, wụsa mmiri ara ehi n'elu iko ndị na-adịghị ọcha, gbakwunye ihe na kefir ma ọ bụ ude mmiri, mix ma hapụ na tebụl kichin.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji mgbakwunye bifidumbacterin, mgbe ahụ ọ na-agbakwụnye n'otu oge na ferment.
Ihe dị ka awa 6-8 n'ime iko ga-apụta clot nke ụdị acid, mgbe nke a gasịrị ị nwere ike ịmegharị efere na kefir na ebe dị jụụ.
Otu ụbọchị mgbe ị gachara, ị ga-adị njikere otu ụbọchị nafir.
A ghaghị icheta na efere ndị ị na-eji iji kwadebe kefir maka ụmụ ọhụrụ kwesịrị ịbụ ihe na-adịghị njọ.
Kedu mgbe m nwere ike ịmalite inye kefir nwa?
Ọtụtụ mgbe mgbe ọ dị ike ịnye kefir maka nwatakịrị, ndị na-ahụ maka ụmụaka ga-ekpebi ọnwa 6-7 ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nọ na-eri nri, na ọnwa asatọ ma ọ bụrụ na nwa ara ya ara. Otú ọ dị, tinye ọgwụ mmiri ara ehi na ịkpachara anya, na-amalite site na otu spoonful ụbọchị ma na-eweta òkè nke yogọt ruo otu afọ na 100 ml.
Enwere m ike itinye nwatakịrị n'ime ọnwa anọ?
Ọgbụ akwụkwọ Goon
Ịzụlite nwatakịrị na ọnwa anọ - ihe kwesịrị ime?
Ole ụmụ ole na-amalite ịwa?
Ihe ndina ụmụaka maka ụmụ ọhụrụ
Rash na ihu nke nwa
Enwere ike ime baptism nwa na-enweghị nne na nna?
Mmiri maka ụmụ amụrụ ọhụrụ
Dowry maka nwa amụrụ ọhụrụ na mgbụsị akwụkwọ
Ụda maka ụmụaka
Ọrịa bụ n'ime ụmụ ọhụrụ
Isiokwu nke umuaka ụmụaka rue otu afọ
Ụlọ ụmụaka maka nwata ahụ
Kedu otu esi ahọrọ oche akwa?
Kedu otu esi achọpụta ụkpụrụ agba gị?
Ihe ngosi nka nke Luxembourg
Ụlọ ndị dị elu
Sinulox maka nwamba
Ombre maka blondes
Uwe ntutu - 2012
Nri oriri dị mma maka ụbọchị 7
Okwukwu na ikwiikwii
Pịa maka nwamba cats
Kedu otu esi achọpụta oke nke okpu?
Pantyhose maka ụmụ nwanyị dị ime
Ntinye menu kwa ụbọchị
Ụmụ nwanyị-ụmụ nwoke maka ụmụ nwanyị dị ime
Ude si scars
Kedu ihe ị ga-esi na Turkey?
Meatballs na gravy - uzommeputa
Nkedo ígwè frying pan - gini ka m kwesiri ime?
Nwepu ihe nhicha